Abukaatoota Jawaar Mohaammad’faa Kadir Bulloo dabalatee maatii hidhamtoota siyaasaa hundi hidhamuu gabaasni nu gahaa jira. – Kichuu
የእነ ጃዋር ጠበቃ የሆኑት ከድር ቡሎን ጨምሮ ዛሬ ቃሊቲ እነ ጃዋርን ለመጠየቅ የሄደ ዘመድ አዝማድ በሙሉ መታሰራቸው ተሰምቷል።
~ Oromo Political Prisoners Defence Team
# Humna_Addaa_Oromiyaaf ~ Mootummaan PPii shakkii guddaa isinirra kaayee jira. Kanaaf hidhannoo guutuu isin hidhachiisuu hin barbaanne. Amma mareen Mootummaa PPii akka nu qaqqabeetti Ijoollee Humna Addaa dirqiin feenee gara Daangaa # Sudaanitti geessinee lolchiifna jechaa jiru. ~ # WBOn kanaan dura Koomaandoo fi RIB irratti tarkaanfii laaleessaa fudhachaa ture, yeroo amma Humna Addaa callisee ilaalaa jira. Warruma barbaaduuf baate qofaa irratti tarkaanfii fudhachaa jira jedhanii Humna Addaa Oromiyaa irratti gama Mootummaan qoqqobbiin kaayamee fe’amanii gara daangaa Sudaan akka imalan godhamaa jira. ~ Bakka tokko tokkotti Humni Addaa kun badanii WBOtti makamaa jiru. Ammas ergaan keenya inni guddaan # Sudaanii si geessanii of-dura si buusanii si fixuuf karoorfatanii jiru. Kanaaf Ergaan WBOn yeroo Muddamaa kanatti isiniif qabu yoo jiraate:- 1. Hidhannoo kee guutuun kottu si simannaati. 2. Bakka jirtuutti naaf dhaami Ati feeyee jennaan WBOn kansaa si godhachuuf qophaa’adha. 3. Diinaaf Da’oo taateefii du’a saree hin du’iin. Kottu ummata keefi dhaabaadhuuti seenaakee bareechi. 4. Oromoof yoo Wareegamte lafeen kee seenaaf lakka’ama. Ekeraan kee ummata Oromoon faarfatamaa ta’a. # Ergaa_Muddama_keef_jennee_siif_katabneedha . Abbaatu itti fayyadama.
የኢትዮጵያ ወታደሮች ተገደሉ፣ “ኤርትራ ወሮናል” ዶ/ር አረጋዊ፣ ኦነግና የማይካድራው ጭፍጨፋ፣ የሶማሊያ ወታደሮች በትግራይና ኳታር| ETHIO FORUM
Jawar Mahamed faan har’as guyyaa 5ffaaf nyaata fudhachuu didanii jiru. Qaamni isaanii baay’ee laafee gadi bahanii nama isaan ilaaluuf dhaqellee dubbisuu dadhabanii jiru. Mootummaan abbaa irree gaafii isaaniitiif deebisaa kennuuf qophiidhaa miti. Inimaayyuu akka isaan dhuman barbaada. Akka Rabbiitiin har’a eege malee Jawar akka isaaniitiin har’a hin eegu ture. Lubbuun rabbiin hin baasin abadan hin baatu. Haqni kun guyyaa tokko inuma injifata. Yaa warra zulmiin hidhaman mara gadi nuuf lakkisi!
Abokaattoon Hayyoota Oromoo kanneen Galmee Obbo Jawaar Jala jiranii Obbo #Kadiir_Bulloo har’a Mana hidhaa Qaallittii deemanii Qabsaa’onni Oromoo qaaliin kanneen Har’atti Guyyaa 4ffaaf Nyaata lagatanii jiraachuu fi haalli Isaan keessa jiran lubbuu Isaaniif yaachisaa tahuu OMNtti himan
Hayyoonni kun Oromoof jedhaniiti gidiraa hamaa kana argaa jiru Oromoon Oldeebi’ee gaafa garaa guuttatee Oolee bulu Yeroo argitu immoo oromoo tahee dhalachuu koottiin gaabbe Saba Galata fira Diina Isaa Adda baasee hamma har’a beekuu hin dandeenyeerraa dhalachuun hedduu nama qaanessa